သင်၏ DESKTOP BROWSER ကိုအပေါ်တစ်ဦး SHORTCUT တခုကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
သင်၏ desktop browser ကိုအပေါ်တစ်ဦး shortcut တခုကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အလွန်ဘုံပြဿနာ - desktop ပေါ်မှာထံမှတံဆိပ်ကို web browser ၏မရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံး။ ဤသည်မသေချာသောသန့်ရှင်းရေး PC များ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါ, သင်တို့ကဲ့သို့စစ်ဆေးခဲ့ပါဘူးလျှင် "Shortcut ကိုဖန်တီးပါ" သင်ဘရောက်ဇာကို install လုပ်သည့်အခါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီအခက်အခဲတစ်ဦးကို Web browser လင့်ထားသည်အသစ်တစ်ခုဖိုင်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ပြေလည်နိုင်ပါသည်။
ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအနေအထားတစ်ခုလေ့လာသူပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်: ယခုငါတို့ဘယ်လို desktop ပေါ်မှာ (desktop ပေါ်က) ​​ကိုတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း link ကိုတင်ထားရန်အများအပြား options များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: browser ကိုထောက်ပြတဲ့ file ကိုပေးပို့ခြင်း
သငျသညျဥပမာအားဖြင့် browser ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်, Google Chrome က။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ဒီကွန်ပျူတာ" ပြီးတော့လိပ်စာသို့သွားပါ:
ကို C: Google က Chrome ကို Application ကို chrome.exe Program Files (x86)
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသင်တို့သည်လည်း Google Chrome ကိုအတူ folder ကိုရှာတှေ့နိုငျ: ပွင့်လင်း "ဒီကွန်ပျူတာ" နှင့်ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်တွင်, ရိုက်ထည့်ပါ "Chrome.exe",
ပြီးတော့စာနယ်ဇင်း « Enter » သို့မဟုတ် search button ကို။
ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုလျှောက်လွှာရှာဖွေခြင်း, ငါတို့ကအပေါ်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ပေါ်တွင်နှိပ်, select လုပ်ပါ "Send"ပြီးတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Desktop ကို (shortcut တခုကိုဖန်တီး)".
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ - ရိုးရှင်းစွာ app ကို drag and drop "Chrome.exe" Desktop ပေါ်မှာ။
Method ကို 2: browser ကိုထောက်ပြတဲ့ဖိုင်ကို Create
ကျနော်တို့ညာဘက်မောက်စ desktop ပေါ်မှာတစ်ဦးအချည်းနှီးသောဧရိယာထဲမှာခလုတ်နဲ့ select လုပ်ပါနှိပ် "Create" - "Shortcut ကို".
browser ကို Google Chrome ကို - တစ်ဦးက window ကိုသင်စက်ရုံသည်ဤအမှု၌, တည်ရှိသည်ရာအရပ်ကိုသတ်မှတ်ရပါမယ်ဘယ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်".
ကျနော်တို့ကတည်နေရာပြ browser ကိုရှာခြင်း:
မျဉ်းမှာတော့ကျနော်တို့က browser နဲ့ကလစ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းတွေ့မြင် "Next ကို".
သငျသညျနာမတျောကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည် - ရေးရန် "Google Chrome ကို" နှင့် Hit "ပြီးပြီ".
အခုတော့ Workspace အတွက်, သငျသညျ ပို. တိကျစွာ၎င်း၏လျင်မြန်ပစ်လွှတ်မှုအတွက်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Web-browser ၏မိတ္တူကိုမြင်ရ, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: Windows တွင်တံဆိပ် "My Computer ကို" ပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လို 8
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သင်၏ desktop ပေါ်မှာက်ဘ်ဘရောက်ဇာကို shortcut တခုကိုဖန်တီးရန်အပေါငျးတို့သနညျးလမျးမြားကိုကွညျ့ရှု။ ခဏ မှစ. ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလျင်အမြန်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။